Router IP Address ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
ဇန္နဝါရီလ 21, 2019 Denial245
သင်၏ router ကိုအသုံးပြုရန်, သငျသညျ router ကိုပေါ်တယ်အသေးစိတ်ကိုရှိရမည်. နှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်, သငျသညျ Router IP လိပ်စာကိုသိရကြမည်. အိုင်ပီလိပ်စာတစ်ခုဆိုသည်မှာအင်တာနက်ပရိုတိုကောတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည် host သို့မဟုတ် network interface ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်တည်နေရာလိပ်စာဖြစ်ပြီးအပြည့်အဝရပ်နားထားသောနံပါတ်လေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။. ယခု, သင်၏ Router IP Address နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးမရှိပါကသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် Router ရဲ့ IP Address ကိုရှာပါ ဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးခြေလှမ်းများအတွက်.
ကောင်းပြီ, router များအတွက် IP address သည် OS နှင့်ကွဲပြားသည်(ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်) အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများ. ဒီ post မှာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်ကူဆုံးသောအဖြေကိုဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သည် “Router IP Address ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း” ကွဲပြားခြားနားသော OS နှင့်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များအတွက်.
Router IP Address ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
Windows OS ရှိ router IP address
သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းသည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးတွင်ရှိနေစဉ် 'ဒေသတွင်းဆက်သွယ်မှု' အစား 'ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှု' ကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည် 8, ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကို 'ကြိုးမဲ့ LAN adapter Wi-Fi' အဖြစ်မြင်လိမ့်မည်, နှင့်ကြိုးဆက်သွယ်မှုကို 'Ethernet adapter Ethernet' ဟုခေါ်သည်.
ရှာဖွေခြင်းဖြင့် Command prompt ကိုဖွင့်ပါ “cmd” ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ.
သင်စာရိုက်ရမည့်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင်အနက်ရောင် ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်လိမ့်မည် “ipconfig”.
အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်သည် Router Default Gateway သို့သင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်အရာများအတွက်ထွက်ရှိလာလိမ့်မည်.
MAC Router IP လိပ်စာ
Terminal ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်ပါ menu ကို ထို့နောက် ရှာဖွေသူ ထို့နောက် လျှောက်လွှာများ ထို့နောက် အသုံးအဆောင်များ ပြီးတော့ Terminal.app.
ပုံစံ “netstat -no | grep default” အဲဒီမှာ.
အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Router Default Gateway ထဲကို ၀ င်လိုက်တဲ့ output ကထွက်လိမ့်မယ်.
Apple menu ကိုနှိပ်ပါ.
'System Preferences' အဖြစ်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ.
သင့်လျော်သောကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုရွေးချယ်ပြီး ‘အဆင့်မြင့်ကိုနှိပ်ပါ’ option ကို.
the ကိုနှိပ်ပါ ‘TCP သို့မဟုတ် အိုင်ပီ‘ tab နှင့် IP address သည်သင်၏ screen ပေါ်တွင်ရှိလိမ့်မည်.
Chrome OS ရှိ router IP address
taskbar တွင်ရှိသော notification area ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ.
ကိုနှိပ်ပါ “XYZ နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်” ပေါ်လာသည့်စာရင်းကနေ option ကို.
သင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်အမည်ကိုရွေးချယ်ပြီးရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ “ကွန်ယက်” အပါအဝင်ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန် tab ကို router ရဲ့ IP လိပ်စာ.
Linux ပေါ်ရှိ Default Router IP Address
ရရှိနိုင်သည့် option ကိုရွေးချယ်ပါ “လျှောက်လွှာများ“.
ကိုနှိပ်ပါ “System Tools များ” ပြီးတော့ “ဂိတ်“.
ပုံစံ “ipconfig” ပြီးတော့ Router Default Gateway ဘေးမှာရဖို့သင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်အရာများအတွက်ထွက်ရှိလိမ့်မည် ‘inet addr‘.
Router IP address သည် iPhone iOS တွင်ဖြစ်သည်
အဖြစ်ရရှိနိုင်သည့် option ကိုရှာပါ “ချိန်ညှိချက်များ” ပြီးနောက်ကိုနှိပ်ပါ “ဝိုင်ဖိုင်“.
တည်နေရာနှင့် option ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်” သင်လက်ရှိချိတ်ဆက်နေသောရန်.
ကြည့်ပါ DHCP သင်၏အထဲကရှာတွေ့မှအပိုင်း router ရဲ့ပုံမှန်အိုင်ပီလိပ်စာ.
ip address ကို mac ဘယ်လိုရှာရမလဲandroid မှာ wifi ip address ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲmodem ip address ကိုကျွန်ုပ်၏ router ဆက်တင်များrouter ip address ကိုစာရင်းrouter ip address ကို software ကိုကျွန်တော့် router ip address ကဘာလဲကြိုးမဲ့ ip address ကို
ယခင် Post မှ:10.0.0.1 login အဒ်မင်
next Post:TP-Link ကို Router ဝင်မည်